Infographic nezveiyo digital canon chirongwa muArgentina | Kubva kuLinux
Infographic nezveiyo digital canon chirongwa muArgentina
Tinobva taenda iyo infographic yakaitwa naDerechoALeer iyo inotsanangura zvakajeka mamiriro azvino eprojekti dhijitari canon kuti urikuedza kupinda mu Argentina Seneti, pamwe neyavo zvinogoneka (zvine njodzi) zvinoreva.
Kurapa kwedigital canon muSeneti kwakamiswa
Miguel Ángel Pichetto akazivisa pane yake Twitter account kumiswa kweiyo digital canon kurapwa munaJune 29 apfuura. Akawedzerawo kuti "Chirongwa chekanononi chichaenderera mberi nekukakavadzana uye pachienzanisirwa pakuchengetedzwa kwekodzero dzehungwaru uye zvinodiwa nevashandisi" uye kuti "takanzwa kuwanda kwemanzwi anopokana nedanho redhijitari uye ndiko sei sarudzo yakaitwa yekuenderera mberi nharo ". Akatumirawo chizere chekuburitsa.
Naizvozvo, kunyangwe hazvo chidzidzo chacho chisina kutaurwa muchikamu cha29 Chikumi, izvi hazvireve kuti hazvizoitwe muzvikamu zvinotevera. Chiyero pakati pekudzivirirwa kwekodzero dzehungwaru uye zvinodiwa nevashandisi zvinofanirwa kutsvakwa, mukufunga, kufunga zvakare izvo zviripo zvemutemo 11.723. Kwete chete nekupa vashandisi kusiyanisa kwekudzidzisa, kunze kwemaraibhurari, uye kusarongeka kwekushandisa kunze, asi nekunyatsofungisisa zvivakwa zvehunyanzvi hwakazara. Mupfungwa iyi, kanoni rekuti "kopi yakavanzika" yemabasa akawanikwa zviri pamutemo haringori bumbiro remitemo chete asi rinomiririra kushandiswa kwesimba nevaridzi vekodzero, uye zvinopesana nedzidziso dzekupererwa kwekodzero. Pamusoro pezvo, zvinoreva kuendeswa kwemari yeruzhinji kumasangano akazvimirira ega, nekuti State manejimendi inoshandisawo maCD, maDVD nemadhiraivhi akaomarara, pakati pevamwe, uye zvingangodaro zvisingaite makopi emabasa enjere anotungamirwa nekodzero. KuEurope vakatotaura kanopfuura kamwechete kuti canon yedhijitari haisi pamutemo, inomanikidza uye haina tsvete. Chiyero chete chinofanira kutorwa kusatora kanoni sechiyero.
Tinofanira kungwarira kurapwa kweramangwana kwemutemo uyu muSeneti. Sarudzo yakatorwa nhasi nemaseneta iyi inzira yekudzikisira hutongi, asi makambani ekudyidzana, senge SADAIC, AADI, CAPIF, ARGENTORES uye SAGAI, vacharamba vachiomerera pakurapwa kwemari iyi, zvisinei nekukanganisa kwainoita muhomwe. yevashandi vese. Naizvozvo zvakakosha kuti uve wakangwarira.
Tevere, ini ndinokusiira iwe bvisa kubva muchirongwa Con Sentido Público, kubva kune yakavhurika yeruzhinji terevhizheni yeArgentina, uko gakava rakarongeka pamusoro pekugona kuitiswa kwedigital canon munyika yedu. Vashanyi vaive Carlos Galettini kubva kuCollective Manager of Directors naBeatriz Busaniche vanobva kuFundación Vía Libre. Pano tinosiya vhidhiyo nechimedu chechirongwa, nerubatsiro rwePublic TV.
mabviro: Vía Libre Foundation
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Infographic nezveiyo digital canon chirongwa muArgentina
Kana mimhanzi yepakutanga CD (kana DVD) ichidhura madhora mashanu panenge pasina humbavha. Uye mvumo yese yaizoenda zvakanyanya kune maartist.
Eduardo Battaglia akadaro
Njodzi Carlos Galettini, haazive kupokana kana kutarisisa pamusoro wenyaya.
Uye kubva pane zvauri kuona, haatozive kuti mari yacho ndeyei nekuti hapana chaanonzwisisa nezve tekinoroji, kugadzirwa, mutengo kana mitemo.
Pindura Eduardo Battaglia
Mukuziva kwaGaletini, ndinofanira here kubhadhara makanika anogadzira starter pese pandinotanga mota? Kwete, anoisa mutengo uye ini ndinobhadhara kana ndikabvuma, nguva, akaita basa kamwe uye nekuda kwechikonzero ichocho ini ndinobhadharisa, kana achida kuenderera mberi nekuchaja, saka anofanira kuramba achishanda, pamwe nekuwedzera kwekuti basa haritengwe nemunhu mumwe chete, asi kwemamirioni, kana iye ari kuda kuimba rwiyo uye kusazomboshanda zvakare, nei ndichifanira kubhadhara Sadaic pese pandinoteerera Mozart?
Aya ma dinosaurs haana kuoneka, pamwe nemifungo yavanotyaira ...
Pindura kuna Cajuma
Galettini akarasika chaizvo mugakava. Ini ndinonyatsonzwisisa kuti iwe unoda kubhadharisa pfuma yehungwaru, asi uri… .se Les Luthiers akati…. »Kukurukurirana kunze kwebhokisi». Ini ndinobvumirana naBeatriz, nei ndichifanira kubhadhara zvakanyanya dhisiki rakaomarara, kana peni yekutyaira, kana ndichiida kuti ishande? Nei uchifunga kuti ndicha pirate mimhanzi?
Hazvina mhosva kuti chikonzero chekuzadzikiswa kwechinyorwa ichi chakanaka sei, munhu anogona kuona nechekure kuti kune yakasviba kumashure uye senguva dzose ... mutengi wekupedzisira achibhadhara mutengo. Ivo vanogara vaine chikonzero chakanaka chekuti vatiwanire imwe mari… Ivo vanoyamwa!
Yakanaka chinyorwa Pablito! Chinangwa hug!
Totally agree ... mwana aisaziva nezvemuchina waGutenberg (ehe, naG weCAT) ... uye paakatanga kutaura nezve "compact discs" ndakamira kumuteerera chaiko ... chaiye asingazive. Iwe unogona kuona kuti chinhu chete "chinomufambisa" kutonhora kwehupfumi kufarira.
Pamusoroi vanhu, ndiri kuenda kunotenga compact disc yetera, ndiri kuuya
Ndokumbirawo, iwe hautomboziva kusiyanisa pakati pehard disk uye cd uye uchida kuuya kuzotaura nezve izvi? Ndakaverenga mutemo uye zvinonyatso kutaura kuti 75% yekuwedzera mhandara cds nema dvd, murume mukuru uyu haazive, uye zvakanyatsonaka Beatriz, aingozvidzivirira nenharo, zvinoitwa sei, ndakavhara muromo wake
Zvizere bvumirana. Mukomana uyu turnip.
Musi waChikunguru 9, 2011 14:46 PM, Disqus
Tsananguro diki, iwe haubhadhare piracy, asi yekuteedzera pachivande, ndiko kuti, kuteedzera iyo CD yawakatenga pakutanga uye yaunopasa pakombuta yako kuti uite backup kana kuiteerera kubva pakombuta. yyyy…. Iwe unogona chete kugadzira kopi uye kwete kuikweretesa kushamwari kana chero chinhu chakadai.
piracy yaizoramba iri pamutemo kana canon ikaitwa.
Hongu, zvinoita seChinese.
Ziva kuti $ 5 haifi yakabuda. uye anoziva zvakare kuti kune avo 5 muimbi haagamuchire chinhu. muimbi anokunda nekudzokorora (zvirinani huwandu hwakawanda hwevanyori).
Kwandiri mhinduro ndeyekuti maartist azviparadzanise kubva kumarekodhi emazita ekunyora ropa, vanoisa maCD paInternet apo chero munhu anogona kuatora, kuisa bhatani rekupa nekushambadzira izvozvi ipapo ipapo. mari yakabhadharwa kuchiratidzo = 0, zvese zvinoenda muzvipo zvese kwaari (kunyangwe zvichange zviri zvishoma pane zvinyorwa, anofunga kuti anotambira zvishoma kubva pachinyorwa, saka zvakafanana kana zvirinani, pamusoro pekuti vashandisi chochos, kushambadza kunobva pashoko remuromo izvo zviri nani uye zvine mhinduro kubva kune vashandisi) uye zvinoramba zvichiwana zvakafanana nezvinoitika.
Iyi pfungwa inodaidzwa yemahara mimhanzi, uye maartist mazhinji ari kutanga kuishandisa, nekuti chitupa hachigone kwavari.
Imwe bhenefiti yeiyi ndeyekuti tsika yakasununguka chaizvo, uye haidzorwe nemamwe marekodhi anotora kuti ndiani anoteererwa uye ndiani asiri (zvinoenderana chete nekutengeserana uye kwete pamhando yemimhanzi, sezvingaonekwa zvese zuva mumawairesi, tv, nezvimwewo)
ehe, nyatso kubvuma, mukomana haaonekwe
Carmen Amorós akadaro
MuSpain takafanana ... Nekudaro, mumwedzi isingasviki mitanhatu nemutemo, Hurumende yakatozivisa shanduko mu dhijitari canon...
Pindura Carmen Amorós
MuSpain isu tiri mumamiriro akafanana ... Nekudaro, mushure memwedzi mitanhatu nemutemo wekanoni, hurumende yakatozivisa shanduko pane izvi dhijitari canon
Dzazvino vhezheni ye Skype
Mirairo yekusunungura nzvimbo neakafanira-tora